Ibekwe kwiiNtaba zeSapphire kwiihektare ezingama-24 kunye nemizuzu elishumi kuphela ukusuka eStevensville, eMontana, yiSapphire Trout. Ngemibono yepanoramic yeentaba zeBitterroot imizuzu elishumi kuphela ukusuka kuMlambo iBitterroot, le ndawo ibonelela ngokunyuka intaba, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, ukuzingela kunye neminye imisebenzi emininzi. Ukufikelela ngasese kumawaka eehektare zomhlaba kawonkewonke kuvumela ukuhamba, ukuhlola kunye nokuzingela amathuba kunye nemibono, awuyi kufuna ukuhamba. Wamkelekile kwiSapphire Trout.
Iveranda yonke yeSapphire Trout yeyakho ukuba uyonwabele. Nyathela phezulu kwaye wonwabele iimbono eziphefumlayo zeeNtaba zeBitterroot okanye uhlale phantsi kwaye unyuse i-AC ngelixa ubukele uMlambo Ubaleka Ngawo okanye ezinye iimuvi zakudala ezifumaneka ngesicelo kwithala lethu leencwadi lobuqu elinezihloko ezingaphezu kwama-500 kwiDVD. Umgangatho ophezulu yindlu encinci enophahla olusezantsi kunye nebhedi egcweleyo.
4.89 ·Izimvo eziyi-117
4.89 · Izimvo eziyi-117
Le yindawo ebumelwaneni ezolileyo eneendawo ezithe gabalala ze-acreage kunye neefama. Ifumaneka kwiintaba zeSapphire ezijonge iintaba zeBitterroot.
Ucango lwam luhlala luvulekele iindwendwe kwaye ndonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo yokuzingela kunye nokuloba, eminye imibuzo yokuzonwabisa, imibuzo yembali kwaye ndonwabile nokuba neendwendwe kwindlu enkulu ukuze ndifumane iziphungo kunye nokutya.
Ucango lwam luhlala luvulekele iindwendwe kwaye ndonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo yokuzingela kunye nokuloba, eminye imibuzo yokuzonwabisa, imibuzo yembali kwaye ndonwabile…